वर्षको अन्तिम दिन सुनको मूल्य मुल्यमा बारी गिरावट, यति सस्तोमा हुदैछ कारोबार ! – Enepali Samchar
वर्षको अन्तिम दिन सुनको मूल्य मुल्यमा बारी गिरावट, यति सस्तोमा हुदैछ कारोबार !
April 13, 2021 April 13, 2021 adminLeaveaComment on वर्षको अन्तिम दिन सुनको मूल्य मुल्यमा बारी गिरावट, यति सस्तोमा हुदैछ कारोबार !
e npaalisalchaar// काठमाडौं – मंगलवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । सोमबार तोलामा एक सय रुपैयाले बढेको सुनको मूल्य आज तोलामा एक सय रुपैयाले नै घटेको हो । सोमबार प्रतितोला ८९ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर तोलाको ८९ हजार ५ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजार ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला १२ सय ६० रुपैंयामा कारोबार भइरहेको छ । काठमाडौं – मंगलवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । सोमबार तोलामा एक सय रुपैयाले बढेको सुनको मूल्य आज तोलामा एक सय रुपैयाले नै घटेको हो ।
सोमबार प्रतितोला ८९ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर तोलाको ८९ हजार ५ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजार ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला १२ सय ६० रुपैंयामा कारोबार भइरहेको छ ।
अनुहारको कोठी मन परेन ? यस्ता घरेलु उपायबाटै सजिलै हटाउन सकिन्छ (भिडियो सहित)
महेश बस्नेत एमाले अप हर ण विभागका प्रमुख हुन् भन्ने खुलासा भएपछि, भयो यस्तो सम्मको कार्य
विश्वका एकसय प्रभा’वशाली महिलाको सूचिमा परेकी सपनाको यो प्रश्नले ऋषि धमला अक्क न बक्क…हेर्नुहोस्